Angovo azo havaozina amin'ny rivotra: angovo azo avy amin'ny rano | Fanavaozana maintso
Izaho dia efa niresaka momba ireo angovo azo havaozina isan-karazany. Angovo geothermal, biomass, sns. Na izany aza, misy loharanom-pahalalana angovo azo havaozina hafa izay tsy dia miely patrana satria eo an-toerana ny fampiasana azy ireo ary ho an'ny toerana kely toa ny trano.
Amin'ity tranga ity andao hiresaka momba ny aeroterma. Inona no atao hoe angovo aerothermal, ahoana ny fomba fiasany, ny tombony omeny antsika sy ny zava-bitany.
1 Inona ny aeroterma?
2 Ahoana ny fiasan'ny aeroterie?
3 Aiza no ampiasaina ny aeroterma?
4 Fahombiazan'ny aeraterma ary manondro ny fametrahana azy
5 Tombony amin'ny fampiasana angovo aeroterma
Inona ny aeroterma?
Nolazaiko fa ny aeroterie dia karazana angovo azo havaozina satria tsy manam-petra io ary hamokarana azy, tsy mila afa-tsy herinaratra manodidina ny ¼ isika. Izy io dia ny fanararaotana ny angovo ao anaty rivotra ivelany, mba hanafanana ny atiny amin'ny alàlan'ny fampiasana paompy hafanana mahomby.
Ny paompy hafanana dia miasa amin'ny fitrandrahana angovo avy amin'ny toerana iray mba hanomezana izany ho an'ny iray hafa. Raha te-hanao an'izany dia mila vovo-trano sy trano iray na maromaro ao anaty ianao. Ny angovo voarakitra anaty rivotra amin'ny fomba voajanahary dia azo ampiasaina amin'ny fomba tsy mety ritra satria atolotra amin'ny endrika mari-pana. Raha esorintsika amin'ny rivotra ny hafanana dia hafanain'ny masoandro indray izy, amin'izay afaka milaza isika fa loharano tsy mety ritra io.
Ny angovo voarakitra anaty rivotra voajanahary, amin'ny endrika maripana, dia misy amin'ny fomba tsy mety ritra, satria afaka mamerina amin'ny laoniny voajanahary (manafana ny herin'ny masoandro), ka ny angovo azo avy amin'ny rivotra dia azo raisina ho toy ny angovo azo havaozina . Amin'ny fampiasana an'io angovo io dia azo atao ny mamokatra hafanana sy rano mafana amin'ny fomba tsy mandoto kokoa, fanatratrarana angovo hatramin'ny 75%.
Ahoana ny fiasan'ny aeroterie?
Ampiasaina matetika ho an'ny mari-pana na famahan-drivotra. Mba hanaovana izany dia mampiasa izahay ny paompy hafanana. Ity dia tompon'andraikitra amin'ny fanafanana na fanamafisana ny rivotra ao an-toerana. Izy io dia miasa noho ny paompy hafanana an'ny karazana rafitra air-air fa izay ataony dia mamoaka ny hafanana misy avy amin'ny rivotra ivelany (ity angovo ity dia misy angovo) ary mamindra azy amin'ny rano. Ity rano ity dia manome ny rafitra fanafanana miaraka amin'ny hafanana hanafana ny toerana. Ny rano mafana koa dia ampiasaina amin'ny tanjona ara-pahasalamana.
Heat pump matetika fahombiazana somary avo sy mahomby manakaiky ny 75%. Na dia amin'ny ririnina aza dia azo ampiasaina amin'ny maripana ambany indrindra miaraka amin'ny fahaverezan'ny fahombiazany. Ahoana no ahazoanao hafanana amin'ny rivotra mangatsiaka amin'ny ririnina? Ity dia fanontaniana iray apetraky ny olona matetika amin'ny tenany rehefa mahare momba ny aerothermal. Na izany aza, izany dia mitranga noho ny paompy hafanana. Hafahafa ihany, ny rivotra, na dia amin'ny maripana ambany indrindra aza, misy angovo miendrika hafanana izy io. Ity angovo ity dia entin'ny vata fampangatsiahana izay mivezivezy ao anaty paompy hafanana, eo anelanelan'ny ety ivelany sy ny trano.
Amin'ny ankapobeny, ny ety ivelany dia miasa toy ny evaporator amin'ny ririnina ary ny efi-trano dia tompon'andraikitra amin'ny maha condenser azy izay mamindra ny hafanana amin'ny rano ao amin'ny faritra fanafanana. Raha resaka fampangatsiahana no resahina fa tsy fanafanana dia ny mifanohitra amin'izay no izy
Aiza no ampiasaina ny aeroterma?
Ny rafitra aeroterma dia natao hampiasaina amin'ny toerana kely. Na dia manana fahombiazana sy fahombiazana lehibe aza izy io, ny sandan'ny kaloria dia tsy dia toy ny manafana faritra midadasika. Namboarina hampiasaina matetika izy ireo tokantrano tokana, trano kely dia kely, ho an'ny trano, sns.
Fahombiazan'ny aeraterma ary manondro ny fametrahana azy
Raha miresaka momba ny fahombiazan'ny angovo dia miresaka momba ny COP (Coefficient of Performance) izahay. Amin'ny Espaniôla dia antsoina hoe coefficient d'exploitation. Raha ny mahazatra, ny paompy hafanana ampiasaina amin'ny angovo aerothermal dia manana COP manodidina ny 4 na 5, miankina amin'ny mpanamboatra azy. Inona no dikan'ity? Izay isaky ny kW-h herinaratra lany dia afaka mamokatra ao ny fitaovana aeroterma fepetra miasa tsara indrindra 5 kW-h mafana.
Azo antoka ny rafitra hiasa hatramin'ny -20ºC. Raha toa ka tsy afaka manome ny mari-pana marina izy ireo dia mampiditra fitaovana fanamafisana mandeha ho azy. Misy ihany koa ny fitaovana eny an-tsena izay afaka miasa miaraka amina vina, amin'ny ankapobeny condensing.
Na dia efa nolazaiko teo aloha aza fa na amin'ny ririnina aza, ny paompy hafanana dia mahavita mamoaka angovo sy hafanana avy amin'ny rivotra ivelany, dia natao ho an'ny toetrandro mafana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fihenan'ny mari-pana any ivelany, ny fahaverezan'ny fahombiazan'ny paompy hafanana. Miasa amin'ny -20º C amin'ny ankapobeny izy ireo izao.
Ny teboka manan-danja indrindra tokony ho raisina ka ny fahombiazan'ny rafitra aerothermal dia avo araka izay azo atao dia:
Fampiasam-bola avo lenta voalohany raha ampitahaina amin'ny rafitra mahazatra
Toerana misy ny ety ivelany (estetika, tabataba ..)
Amin'ny faritra mangatsiaka be dia be, mihena ny vokatra ara-potoana, noho izany dia tsara ny hanaovana fanadihadiana ara-toekarena lalina.
Ny zavatra mety dia ny fananana rafitra fanafanana maripana ambany, toy ny fanamainana ambanin'ny tany na radiatera mahomby.
Tombony amin'ny fampiasana angovo aeroterma
Tokony hoheverintsika fa ny angovo aerothermal dia mampiasa angovo avy amin'ny rivotra, noho izany azo havaozina sy maimaim-poana izy io. Inona koa afaka ananantsika 24 ora isan'andro. Mandinika sy mitanisa ireo tombony ananany izahay:
Ny vidin'ny fikojakojana dia ambany noho ny an'ny rafitra nentim-paharazana. Satria ny paompy hafanana dia tsy manana trano fandoroana na fandoroana, dia tsy miteraka fako ary tsy mila fanadiovana.
Tsotra ny fametrahana satria tsy mila faritra hitahirizana solika.
Satria tsy mitaky karazana fantsom-panafahana entona flue io dia tsy mitaky fivoahana am-baravarankely na tampon-trano.
Mandray anjara amin'ny fiarovana an-trano amin'ny tsy fitahirizana solika.
Tsy dia miankina loatra amin'ny solika fôsily izy io ary noho izany dia manana anjara biriky tena ambany amin'ny fampitomboana ny vokatry ny trano fonenana sy ny fiovan'ny toetrandro.
Matetika dia avo dia avo ny zava-bitany.
Satria tsy misy ny fandoroana amin'ny fitaovana aerothermal, ny etona rano dia tsy vokarina izay mety hiteraka fahatapahana sy hanimbana ireo fitaovana. Noho io antony io dia tsy vitan'ny hoe tsy misy fetran'ny mari-pana miverina, fa ilaina kosa ny miasa ambany kokoa ny fitaovana aeroterma satria amin'ity fomba ity dia mitombo haingana ny asany (COP).
Araka ny hitanao, ny angovo aerothermal dia loharanon-kery hafa azo havaozina izay, toy ny boiler biomassa sy ireo mahazatra hafa, dia afaka manamboatra trano sy tranobe kely amin'ny fomba mahasalama ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo azo havaozina amin'ny rivotra: angovo azo avy amin'ny rivotra
tohatra benjamin dia hoy izy:
Salama Germán, arahaba soa amin'ny lahatsoratra. Misaotra anao nampiasa sary avy amin'ny pejinay, ary mijanona eo am-pelatananao izahay, arahaba avy amin'i Toshiba Aire.
Mamaly an'i benjamin escalonilla
Bryan rosalino dia hoy izy:
Ry Germán Portillo malala, miarahaba anao amin'ny pejinao. Fandraisana anjara tsara.
Valiny tamin'i Bryan Rosalino
Tena tohina aho tamin'ity andalana ity ary mieritreritra aho fa tsy misy marina:
“Ny rafitra aeroterma dia natao hampiasaina amin'ny toerana kely. Na dia manana fahombiazana sy fahombiazana lehibe aza izy io, ny sandan'ny kaloria dia tsy dia toy ny manafana faritra midadasika. Namboarina hampiasaina amin'ny trano tokana izy ireo, trano kely dia kely, ho an'ny trano sns. "
Amin'ny lafiny iray, ny sehatra ara-barotra rehetra dia mampiasa angovo aerothermal ho an'ny fifehezana rivotra. Mampiasa angovo aerothermal ny ivontoerana fiantsenana 100.000 3 m². Ary heveriko fa tsy toerana kely ireo! Ny sandan'ny kaloria dia ilaina rehefa manadio ny fametrahana. Izy ireo dia mety ho 2kW na XNUMXMW. Tsy hitako izay misy ny teknolojia misakana ny fametahana azy io na lehibe na kely aza ny filàna.
Ny fracking dia afaka manohy ampiasaina any Espana